समाज – Page 432 – Halkaro
यु–१९ एसिया कप क्रिकेटका लागि प्रारम्भिक चरणमा ५२ खेलाडी छनोट
प्रकाशित मिति : २०७३, ७ मंसिर मंगलवार
काठमाडौँ, मंसिर ७ । यु–१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि प्रारम्भिक चरणमा ५२ जना खेलाडी छनोट भएका छन् । श्रीलङ्कामा डिसेम्बर ८ देखि हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले विभिन्न ६ स्थानमा ट्यालेन्ट हण्ट कार्यक्रम गरी ५२ जना खेलाडी छनोट गरेको हो । क्यानले खेलाडी छनोट गर्नका लागि काठमाडौँ, धनगढी, नेपालगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र […]
सिंहदरबार र सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक हिटर चलाउन प्रतिवन्ध
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूमा अनावश्यक रूपमा विद्युतिय सामाग्री प्रयोगमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्कारी निर्देशक कुलमान घसिङलार्इ तत्काल सार्वजनिक स्थानमा अनावश्यक रूपमा विद्युत उपभोग भएको पाए निरूत्साही तथा कारवाही गर्न निर्देशन दए । सार्वजनिक स्थानमा अनावश्यक समयमा समेत विद्युत् उपयोग भइरहेको पाइएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले […]
लघु जलविद्युत् व्यवसायीको सम्मेलन काठमाडौँमा
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका लघु जलविद्युत् व्यवसायीको संस्था ‘हाइड्रो इम्पावरमेन्ट नेटवर्क’को तेस्रो वार्षिक सम्मेलन तथा कार्यशाला गोष्ठी मंगलबार राजधानीमा सुरू भएको छ । नेपाल लघु जलविद्युत् विकास संस्थाको आयोजनामा भएको चारदिने उक्त सम्मेलनको जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले उद्घाटन गरे । सम्मेलनमा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, […]
योगगुरू रामदेव नेपालमा
प्रकाशित मिति : २०७३, ७ मंसिर मंगलवार November 22, 2016
काठमाडौँ, मंसिर ७ । चर्चित योग गुरु रामदेव नेपाल अाएका छन् । वीरगञ्जमा हुने योग कार्यक्रममा सहभागि हुन उनी मंगलबार नेपाल अाइपुगेका हुन् । उनलार्इ काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एनअारएनका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पतन्जली योग पीठ नेपालका शालिग्राम सिंह विमानस्थल पुगेका थिए । उनलार्इ नेपाली ढकाटोपी लगाएर स्वागत गरियो । रामदेवले ढाका टोपी र […]
गोरु काट्ने दुर्इ जना पक्राउ
दोलखा, मंसिर ७ । जिल्लाको जिरीबाट प्रहरीले गोरू काटेको अभियोगमा दुर्इ जनालार्इ पक्राउ गरेको छ । सोमबार राती प्रहरीले जिरी नगरपालिका-५ नाबुक टोलका ३८ वर्षीय फुर्वा शेर्पा र ६० वर्षीय पल्दे शेर्पालार्इ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । स्थानीयवासीले दिएको सूचनाका आधारमा राति ८ बजे उनीहरुलाई गोठमा मासु काट्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय […]
सडक दुर्घटनामा १७ को मृत्यु, ३७ जना घाइते
चीन, मंसिर ७ । चीनको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने बेइजिङ—कुनमिङ राजमार्गमा ५६ ओटा सवारीसाधन एकै ठाउँमा परेर भएको दुर्घटनामा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । यस दुर्घटनामा अन्य ३७ जना घाइते भएका छन् । सान्सी राज्यमा पर्ने सो ठाउँमा स्थानीय समयानुसार सोमबार बिहान ९ बजे दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटना भएका बेला सडकमा […]
चिकित्सक केसीको समर्थनमा अस्पतालका रेसिडेण्ड डाक्टरहरू
काठमाडौँ, मंसिर ७ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले अनसनमा बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि माग गरेका छन् । उनीहरूले चिकित्सक केसीको समर्थनमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । अस्पतालका नेशनल रेसिडेण्ट डाक्टर्स एशासियसनका अध्यक्ष डा. लिजन महर्जन तथा डा. विष्णु भण्डारीले विज्ञप्ती जारी गरेर डा. गोविन्द केसीको अनसनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न […]
जापानमा शक्तिशाली भुकम्पः सुनामीको खतरा, क्षतीको विवरण अाउन बाँकी
काठमाडौँ, मंसिर ७ । जापानको उत्तर–पूर्वी तटमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । फुकुशिमाबाट ७० किलोमिटर टाढा ११ किमि पर केन्द्रविन्दु बनाएर ७.२ म्याग्नेच्यूडको भूकम्प जाँदा सुनामी उत्पन्न भएको छ । करिब १० फिट सम्म अग्लो सुनामीमा छाल समुन्द्रमा देखिएका छन् । अाज गएको भूकम्प र सुनामीले कुनै मानविय क्षती नभएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् […]
वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व अन्त्यका लागि कार्यक्रम ल्याउँदै सरकार
प्रकाशित मिति : २०७३, ६ मंसिर सोमबार
चितवन, मंसिर ६ । वन मन्त्री शंकर भण्डारीले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व अन्त्यका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएका छन् । सोमबार चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भण्डारीले त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माणको काम भईरहेको बताए । जटिल विषय भएकाले यसलाई व्यवस्थापनका लागि ऐन संशोधन गर्नु पर्ने भए पनि सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो […]
५९ एसपीको सरूवा (को कहाँ सरूवा भए ?)
काठमाडौँ, मंसिर ६ । नेपाल प्रहरीले ५९ जना एसपी (प्रहरी उपरीक्षक)को एकसाथ सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालले ५९ प्रहरी उपरीक्षकलार्इ सरूवा गरेको हो । यसमा केही जिल्लाका प्रहरी प्रमुख पनि फेरिएका छन् । भक्तपुर प्रहरी परिसरमा किरण राणालाई पठाइएको छ । यसअघि भक्तपुरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध […]